Street Fighter V: Champion Edition (PC) | Net Guide
Home Infotainment Games Street Fighter V: Champion Edition (PC)
Author: GT (Excellent)
ဂိမျးဈေးကှကျအတှငျးမှာ Shooting ဂိမျးတှအေထှကျကွဲလာတာနဲ့အမြှ PlayStation ပလကျဖောငျး တှဖေကျကနေ PC ဈေးကှကျဖကျကို ခပျစိပျစိပျဝငျရောကျလာတာကတော့ Fighting ဂိမျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဂိမျးတှထေဲမှာမှ Street Fighter စီးရီးဟာလဲ နာမညျကြျောစီးရီးတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျပါ။ အခု လကျရှိမှာတော့ Street Fighter ဟာ (၂၀၁၆)တုနျးက Microsoft Windows, PlayStation 4, Linux တို့ အတှကျ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Street Fighter V ကို Champion Edition အနနေဲ့ ထပျမံပှဲထုတျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Street Fighter V ဟာ ပငျမစီးရီးရဲ့ (၆)ခှမွေောကျဖနျတီးမှုဖွဈပွီး Champion Edition ကို (၂၀၂၀)၊ ဖဖေျော ဝါရီအတှငျးမှာ ဖွနျ့ခြိမယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒီဂိမျးလေးကို ဖနျတီးရေးဆှဲပေးတာကတော့ နာမညျကြျော Capcom ရဲ့ Dimps အုပျစုဖွဈပွီး ဖွနျ့ခြိပေးမယျ့ Publisher ကလညျး Capcom ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Street Fighter V ရဲ့ နောကျခံကာလကို Street Fighter III နဲ့ Street Fighter IV ရဲ့ ကွားကာလကို ဖနျတီးပေးထားမှာဖွဈပွီး ယခု Champion Version မှာ Season 1, 2, 3,4တုနျးက DLC Character တှေ အားလုံး ထညျ့သှငျးပေးထားမှာပါ။ Character အသေးစိတျအနနေဲ့ကတော့ Birdie, Cammy, Chun-Li, Dhalsim, F.A.N.G, Karin အစရှိတဲ့ Base Roster က ဇာတျကောငျ (၁၆)ဦး၊ Season One တုနျးက Alex, Balrog, Guile, Ibuki, Juri, Urien (၆)ဦး၊ Season Two ကဇာတျကောငျတှဖွေဈတဲ့ Abigail, Akuma, Ed, Kolin, Menat, Zeku (၆)ဦး၊ Blanka, Cody, Falke, G, Sagat, Sakura အစရှိတဲ့ Season Three က (၆)ဦးနဲ့ Season Four က E. Honda, Gill, Kage, Lucia, Poison, Seth အစရှိတဲ့ (၆)ဦး၊ စုစုပေါငျးဇာတျကောငျ (၄၀) ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
အသဈဖနျတီးထားတဲ့ဇာတျကောငျတှကေတော့ အမညျမသိတိုငျးပွညျက စဈသညျတျော Necalli, အရှအေ့လယျပိုငျးက လပှေသေိုငျးသမား Rashid, ဂြူဂဈြဆုပညာရှငျ ဘရာဇီးသူ Laura Matsuda နဲ့ အတှငျးအားပညာရှငျ F.A.N.G တို့ဖွဈပါတယျ။ Game Mode သဈတှအေနနေဲ့ Arcade Mode နဲ့ Extra Battle Mode တို့ကို ဖနျတီးပေးထားမှာပါ။ Game Play Features ပိုငျးမှာလညျး ယခငျ Focus Attacks အစား Street Fighter III မှာတုနျးကပါဝငျခဲ့တဲ့ EX gauge ကို ပွနျလညျထညျ့သှငျးပေးထားတာတှရေ့ပါမယျ။
ဒါ့အပွငျ V-Skills, V-Reversals, V-Triggers ဆိုပွီး Technique (၃)မြိုးနဲ့ ပွောငျးလဲဆော့ကစားနိုငျတဲ့ V-Gauge ဆိုတဲ့ Feature သဈလညျး ထပျမံပါဝငျလာဦးမှာဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှအေကွိုကျတှကွေ့ဦးမှာပါ။ Street Fighter III ကို ကစားဖူးသူတှအေနနေဲ့ Stun Meter ဆိုတဲ့ Feature ကိုလညျး မှတျမိကွဦးမယျထငျပါတယျ။ ယခု Street Fighter V မှာလညျး Health Bar ရဲ့ အောကျနားမှာ Stun Meter ကို တဈကြော့ပွနျထညျ့သှငျး ပေးထားတာတှရေ့မှာပါ။
ဖိုကျတငျဂိမျးတှရေဲ့အသကျလို့ဆိုရမယျ့ ဂရပျဖဈရုပျထှကျလှုပျရှားမှုတှေ သှကျလကျ မွနျဆနျစဖေို့အတှကျ ဒီဂိမျးလေးမှာ အဓိကပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Unreal Engine4ဂိမျးအငျဂငျြပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဂိမျးလေးကိုဆော့ကစားမယျဆိုရငျတော့ OS: Windows764-bit. Processor: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz. Memory:6GB RAM. Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 480, GTX 570, GTX 670 အနညျးဆုံးလိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။ အစဉျအလာကွီးမားတဲ့ Capcom ကနေ ဖနျတီးတငျဆကျပေးမယျ့ ဂိမျး ဖွဈတာကွောငျ့ (၂၀၂၀)၊ ဖဖေျောဝါရီမှာ ပရိသတျအတှကျ စောငျ့မြှျောရကြိုးနပျတဲ့ အခှဖွေဈမယျ့အကွောငျး သတငျးကောငျးလေးပေးလိုကျရပါတယျ။
ဂိမ်းဈေးကွက်အတွင်းမှာ Shooting ဂိမ်းတွေအထွက်ကြဲလာတာနဲ့အမျှ PlayStation ပလက်ဖောင်း တွေဖက်ကနေ PC ဈေးကွက်ဖက်ကို ခပ်စိပ်စိပ်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ Fighting ဂိမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂိမ်းတွေထဲမှာမှ Street Fighter စီးရီးဟာလဲ နာမည်ကျော်စီးရီးတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ အခု လက်ရှိမှာတော့ Street Fighter ဟာ (၂၀၁၆)တုန်းက Microsoft Windows, PlayStation 4, Linux တို့ အတွက် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Street Fighter V ကို Champion Edition အနေနဲ့ ထပ်မံပွဲထုတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Street Fighter V ဟာ ပင်မစီးရီးရဲ့ (၆)ခွေမြောက်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပြီး Champion Edition ကို (၂၀၂၀)၊ ဖေဖော် ၀ါရီအတွင်းမှာ ဖြန့်ချိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဂိမ်းလေးကို ဖန်တီးရေးဆွဲပေးတာကတော့ နာမည်ကျော် Capcom ရဲ့ Dimps အုပ်စုဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချိပေးမယ့် Publisher ကလည်း Capcom ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Street Fighter V ရဲ့ နောက်ခံကာလကို Street Fighter III နဲ့ Street Fighter IV ရဲ့ ကြားကာလကို ဖန်တီးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ယခု Champion Version မှာ Season 1, 2, 3,4တုန်းက DLC Character တွေ အားလုံး ထည့်သွင်းပေးထားမှာပါ။ Character အသေးစိတ်အနေနဲ့ကတော့ Birdie, Cammy, Chun-Li, Dhalsim, F.A.N.G, Karin အစရှိတဲ့ Base Roster က ဇာတ်ကောင် (၁၆)ဦး၊ Season One တုန်းက Alex, Balrog, Guile, Ibuki, Juri, Urien (၆)ဦး၊ Season Two ကဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ Abigail, Akuma, Ed, Kolin, Menat, Zeku (၆)ဦး၊ Blanka, Cody, Falke, G, Sagat, Sakura အစရှိတဲ့ Season Three က (၆)ဦးနဲ့ Season Four က E. Honda, Gill, Kage, Lucia, Poison, Seth အစရှိတဲ့ (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်းဇာတ်ကောင် (၄၀) ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ အမည်မသိတိုင်းပြည်က စစ်သည်တော် Necalli, အရှေ့အလယ်ပိုင်းက လေပွေသိုင်းသမား Rashid, ဂျူဂျစ်ဆုပညာရှင် ဘရာဇီးသူ Laura Matsuda နဲ့ အတွင်းအားပညာရှင် F.A.N.G တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Game Mode သစ်တွေအနေနဲ့ Arcade Mode နဲ့ Extra Battle Mode တို့ကို ဖန်တီးပေးထားမှာပါ။ Game Play Features ပိုင်းမှာလည်း ယခင် Focus Attacks အစား Street Fighter III မှာတုန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့ EX gauge ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးထားတာတွေ့ရပါမယ်။
ဒါ့အပြင် V-Skills, V-Reversals, V-Triggers ဆိုပြီး Technique (၃)မျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲဆော့ကစားနိုင်တဲ့ V-Gauge ဆိုတဲ့ Feature သစ်လည်း ထပ်မံပါဝင်လာဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ကြဦးမှာပါ။ Street Fighter III ကို ကစားဖူးသူတွေအနေနဲ့ Stun Meter ဆိုတဲ့ Feature ကိုလည်း မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ယခု Street Fighter V မှာလည်း Health Bar ရဲ့ အောက်နားမှာ Stun Meter ကို တစ်ကျော့ပြန်ထည့်သွင်း ပေးထားတာတွေ့ရမှာပါ။
ဖိုက်တင်ဂိမ်းတွေရဲ့အသက်လို့ဆိုရမယ့် ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေ သွက်လက်မြန်ဆန်စေဖို့အတွက် ဒီဂိမ်းလေးမှာ အဓိကပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Unreal Engine4ဂိမ်းအင်ဂျင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ OS: Windows764-bit. Processor: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz. Memory:6GB RAM. Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 480, GTX 570, GTX 670 အနည်းဆုံးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ Capcom ကနေ ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးမယ့် ဂိမ်း ဖြစ်တာကြောင့် (၂၀၂၀)၊ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ပရိသတ်အတွက် စောင့်မျှော်ရကျိုးနပ်တဲ့ အခွေဖြစ်မယ့်အကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေးလိုက်ရပါတယ်။
Previous articleXiaomi Mi 9T Pro
Next articleWebsites & Facebook စာမကျြနှာမြား